Mitombo: Manamboara ny Dashboard Marketing Internet Ultimate | Martech Zone
Mpankafy lehibe ny tondro fampisehoana maso izahay. Amin'izao fotoana izao, mandeha ho azy ny tatitra momba ny fanatanterahana isam-bolana amin'ny mpanjifanay, ary ao anatin'ny biraonay, manana efijery lehibe iray izahay izay mampiseho dashboard amin'ny fotoana tena izy ireo famantarana ny fahombiazan'ny mpanjifa amin'ny Internet. Fitaovana lehibe iray izy io - ampahafantaro anay foana hoe iza ny mpanjifa mahazo valiny ambony ary iza no manana fotoana azo hatsaraina.
Raha mbola mampiasa izahay izao Geckoboard, misy fetra roa azontsika atrehana rehefa manohy manamboatra tsara ny dashboard izahay, manatsara izany ary manampy mpanjifa. Geckoboard dia manana fantsom-pifandraisana marobe izay tsotra ny manampy sy mandamina amin'ny dashboard. Na izany aza, tsy dia azo namboarina izy ireo - miaraka amina safidy voafetra sy voafaritra tsara.
Grow manolotra tabilao azo namboarina tanteraka miaraka amina tombony maro:
Sizing - Ny widget tsirairay avy dia azo refesina mihoatra ny refy tsotra.
takela - Raha tokony hanana loharano mahaleo tena isaky ny widget ianao dia afaka manangona loharanom-pahalalana marobe. Alao an-tsaina ve ny fiovam-po sy ny fidiram-bola nopetahany takela-bolan'ny olona!
Data Sources - Raha tsy ampy ny widgets am-bifotsy, dia azonao atao koa ny manampy ny loharano angon-drakitrao manokana amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ireo loharano angon-drakitra an-tserasera sy ny fanaovana ny tabilao ny vokatra ampiasana ireo Widget an'i Grow.
Manome eritreritra matotra izahay hampivelatra ny fomba amam-panao tabilao marketing amin'ny Internet ho an'ny mpanjifanay tsirairay ary avy eo manafoana tanteraka ny tatitra ataonay. Na dia mitaky asa kely aza ny famitanay ny tetezamita, dia tena hisy ny fitehirizana vola amin'ny ankapobeny amin'ny fivezivezena ireo mpanjifantsika amin'ity lalana ity. Ary tsy mila manao tatitra intsony - fa hanana ny angon-drakitra rehetra amin'ny fotoana tena izy isika.
Ao anatin'ny resadresaka ataontsika amin'ny solontenan'ny Grow dia mety misy fanairana koa ho avy tsy ho ela eo amin'ny lampihazo izy ireo. Mety tsy hisy dikany amin'ny tetezamita eto amintsika izany. Alao an-tsaina hoe nampandrenesina tamina fitomboan'ny fifamoivoizana na fidinana mitete ianao!
Grow no fomba tsotra indrindra hidirana amin'ny angon-drakitrao ary alao sary an-tsaina izany amin'ny scoreboard amin'ny fotoana tena izy. Rehefa refesina ny fahombiazan'ny orinasa dia azo hatsaraina. Ary ekipa mahalala ny isa, milalao handresy!
Ny fampidirana ankehitriny dia misy ny Act-on, Amazon Redshift, Amazon S3, Appraisal, Asana, Box, CSV, Custom Rest API, Channel Advisor, Database Connector, Dropbox, Facebook, Facebook Ads, Freshbooks, FTP / SFTP File access, Github, Google Adwords , Google Analytics, Google Spreadsheets, Harvest, HP Vertica, Infusionsoft, Insidesales.com, Instagram, Magento, Mailchimp, Marketo, Mixpanel, MongoDB, Mysql, Netsuite, NuoDB, Oracle, PostgreSQL, Quickbooks Online, Shopify, Shipstation, Salesforce, SQL mpizara, Sugar CRM, Fiaraha-miasa, Twitter, Vertica Database, Xero, Youtube, Zoho Books, Zoho CRM, mpivarotra Amazon afovoany, Amazon S3, Hubspot, Mamerimberina ary mampifandray ny IQ. Ho avy tsy ho ela ny Microsoft Dynamics CRM.
Tags: Act-OnAmazon Hafaingana radialaamazon s3Mpivarotra Amazon afovoanyfanombananaAsanaBoxMpanolo-tsaina ChannelCSVCustom Rest APIanaty fiarafampiharana dashboardsehatra dashboardConnector DatabaseDropboxFacebookfacebook adsFreshbooksFidirana FTP / SFTP fidiranaGitHubgoogle adwordsGoogle AnalyticsGoogle SpreadsheetsmitombofijinjanaHP VerticahubspotInfusionsoftinsidesales.comInstagrampifidiananamagentomailchimptabilao marketingfampiharana dashboard marketingmarketoMixpanelMongoDBMySQLnetsuiteNuoDBOraclePostgreSQLQuickbooks amin'ny InternetMiverimberinaAmpifandraiso ny IQsalesforcesamboshopifySQL ServerGula CRMAza Tia TenaTwitterVertica DatabaseXeroYouTubeZoho BokyZoho CRM
13 Septambra 2016 à 12:25
Oay! Misaotra anao noho ilay lahatsoratra mahafinaritra. Manana orinasa ara-barotra mahafinaritra vitsivitsy tia ny Grow izahay. Tianay ny hampiseho demo haingana izay liana. http://www.grow.com/bi-demo/